Bit By Bit - မေးမေးခွန်းတွေကို - 3.4 အဘယ်သူမေးရန်
ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာနှင့် Non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာအလေ့အကျင့်၌ကွဲပြားခြားနားသောနေကြသည်မဟုတ်, နှစ်ဦးစလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွက်ကြောင့်သမျှသောအလေးအကြောင်းပါပဲ။
နမူနာသုတေသနလုပ်ငန်းကွင်းဆင်းအခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသီများက၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်လူဦးရေအတွက်လူတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးမြန်းနီးပါးဘယ်တော့မှမ။ ဤကိစ်စတှငျ, စစ်တမ်းများထူးခြားသောမဟုတ်ပါဘူး။ အများစုမှာသုတေသန, တလမ်းတည်းသို့မဟုတ်အခြားအတွက်နမူနာပါဝငျသညျ။ တစ်ခါတစ်ရံဤနမူနာကိုသုတေသီများကအတိအလင်းကိုပြုသဖြင့်, ကလုံးလုံးလြားလြားဖြစ်ပျက်အခြားကြိမ်။ ဥပမာအားဖြင့်သူမ၏တက္ကသိုလ်အတွက်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကိုအပေါ်တစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုပြေးတဲ့သုတေသီလည်းနမူနာယူထားပါတယ်။ ထို့ကြောင့်နမူနာဤစာအုပ်ကိုတစ်လျှောက်လုံးတက်လာမယ့်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ငါအချက်အလက်များ၏ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်သတင်းရပ်ကွက်များနှင့် ပတ်သက်. ကြားသောသိအသုံးအများဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများထဲကတစ်ခု "သူတို့ကိုယ်စားလှယ်မရှိကြပေ။ " ကျနော်တို့ကဒီ Section မှာမြင်ရပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပါသည်, ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုအများအပြားသံသယဝါဒီသဘောပေါက်ထက်လျော့နည်းအလေးအနက်နှင့်ပိုပြီးသိမ်မွေ့နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ငါ "ကိုယ်စားပြုမှု" ၏တပြင်လုံးကိုအယူအဆဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် Non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာစဉ်းစားဘို့အထောကျအကူပွုမဟုတ်ကြောင်းငြင်းပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအစား, သော့ကိုခန့်မှန်းချတဲ့အခါဒေတာစုဆောင်းခဲ့ပုံကိုကဒေတာစုဆောင်းအတွက်မည်သည့်ဘက်လိုက်မှုပြု ပြင်. ရနိုင်ပုံကိုစဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်။
လောလောဆယ်ကိုယ်စားပြုမှုမှကြီးစိုးသီအိုရီချဉ်းကပ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာဿုံကွပ်မျက်ခံရခဲ့တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာနည်းလမ်းနှင့်အတူစုဆောင်းကြသောအခါ, သုတေသီများသူတို့ပစ်မှတ်လူဦးရေနှင့် ပတ်သက်. ဘက်မလိုက်ခန့်မှန်းချက်အောင်ကောက်ယူသောလမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့ဒေတာအလေးချိန်နိုင်ကြသည်။ သို့သော်စုံလင်သောဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာအခြေခံအားဖြင့်တကကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျဖွစျသှားတာပါ။ နှစ်ခုအဓိကပြဿနာတွေ 1) Non-တုန့်ပြန်) ပစ်မှတ်လူဦးရေနှင့် frame ကိုလူဦးရေအကြားနှင့်2ကွဲပြားခြားနားမှု (ဤစာပေ Digest မဂ္ဂဇင်းစစ်တမ်းပျက်စီးကြောင်းအတိအကျပြဿနာတွေရှိပါတယ်) ပုံမှန်အားဖြင့်ရှိပါတယ်။ အများကြီးရူပဗေဒပညာရှင်တစ်ဦး frictionless ဘောလုံးကိုကိုစဉ်းစားလမ်းကိုတူသောအထောက်အကူဖြစ်စေ, စိတ္တဇမော်ဒယ်တစ်ဦးအပြတ်အသတ်ရှည်လျားဆငျးသကျကိုလှိမ့်အဖြစ်ထို့ကြောင့်မဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပျက်တစ်ခုလက်တွေ့ကျကျမော်ဒယ်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာစဉ်းစားခြင်းထက်, ကဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာစဉ်းစား သာ. ကောင်း၏ ချဉ်းကပ်လမ်း။
ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာဖို့အခြားရွေးချယ်စရာ Non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့် Non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာအကြားအဓိကကွာခြားချက်လူဦးရေအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာလူတိုင်းနဲ့ပါဝင်၏တစ်ဦးဟုလူသိများဖြစ်နိုင်ခြေရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ Non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာအများအပြားမျိုးကွဲ, တကယ်တော့, ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒေတာစုဆောင်းဤနည်းလမ်းများဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် ပို. ပို. အဖြစ်များဖြစ်လာကြပါတယ်။ သို့သော် non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်စာရင်းအင်းပညာရှင်များအကြားတစ်ဦးသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်။ တကယ်တော့, Non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာထိုသို့သောစာပေ Digest မဂ္ဂဇင်း fiasco (အစောပိုင်းဆွေးနွေးကြသည်) နှင့် 1948 ခုနှစ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် ပတ်သက်. မမှန်ကန်ကြောင်းခန့်မှန်းအဖြစ်စစ်တမ်းသုတေသီများ၏အများဆုံးသိသိသာသာဆုံးရှုံးမှုအချို့နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ် ( "Dewey Truman အနိုင်ယူ") (Mosteller 1949; Bean 1950; Freedman, Pisani, and Purves 2007) ။
သို့သော်အချိန်အကြောင်းရင်းနှစ်ခုအဘို့ကို non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာပြန်လည်စဉ်းစားရန်မှန်ပေ၏။ ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာအလေ့အကျင့်ကိုပြုကြဖို့ ပို. ပို. ခက်ခဲဖြစ်လာကြပါပြီအဖြစ်ပထမဦးစွာ, ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာနှင့် Non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာအကြားမျဉ်းမှုန်ဝါးစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ Non-တုန့်ပြန်၏မြင့်မားသောနှုန်းထား (ယခုစစ်မှန်သောစစ်တမ်းများရှိကဲ့သို့) ရှိပါတယ်အခါ, ဖြေဆိုသူဘို့ပါဝင်နိုင်၏အမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်ခြေလူသိများကြသည်မဟုတ်, ထို့ကြောင့်, ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာနှင့် Non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာအများအပြားသုတေသီများကယုံကြည်သကဲ့သို့ကွဲပြားနေကြသည်မဟုတ်။ Post-stratification: ငါတို့သည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမြင်ရပါလိမ့်မည်အဖြစ်တကယ်တော့, နှစ်ဦးစလုံးချဉ်းကပ်မှုအခြေခံအားဖြင့်တူညီခန့်မှန်းချက်နည်းလမ်းအပေါ်အားကိုး။ ဒုတိယအချက်မှာ Non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာများစုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအများအပြားဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုရှိခဲ့ပါပြီ။ ဤရွေ့ကားနည်းလမ်းများငါကအဖြစ်သူတို့အထင်ဖို့သဘာဝကျပါတယ်ထင်သောအတိတ်အတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်စေသောနည်းလမ်းများမှလုံလောက်ကွဲပြားခြားနား "Non-ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာ 2.0 ။ " ကျနော်တို့ကြောင့်အဖြစ်ပျက်ကြောင့်အမှားအယွင်းများ၏ Non-ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းလမ်းများကိုမှမဲ့ခြင်းကိုမနှစ်သက်ရှိသည်မဟုတ်သင့်ပါ အချိန်ကြာမြင့်စွာကလွန်ခဲ့တဲ့။
ဆက်လက်. ဤဆင်ခြေကိုပိုမိုကွန်ကရစ်စေရန်အလို့ငှာငါစံဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာနှင့်တွက်ဆ (ပုဒ်မ 3.4.1) ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။ သော့ကိုစိတ်ကူးသင်မည်သို့သင့်ရဲ့ဒေတာစုဆောင်းသင်ခန့်မှန်းစေပါဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်သင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ လူတိုင်းပါဝင်၏တူညီသောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်အထူးသဖြင့်, ပြီးတော့လူတိုင်းတူညီတဲ့အလေးချိန်ရှိသည်မဟုတ်သငျ့သ​​ညျ။ သင့်ရဲ့နမူနာဒီမိုကရေစီမပါလျှင်အခြားစကားလုံးမြား၌, ထို့နောက်သင့်ခန့်မှန်းချက်ဒီမိုကရေစီမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ haphazardly စုဆောင်းဒေတာ (ပုဒ်မ 3.4.2) ၏ပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှတွက်ဆအပေါ်အာရုံစိုက်ကြောင်းတပါးတည်း, ဒေတာဘယ်လောက်ပိုပြီးထိန်းချုပ်နေရာချဖို့ကြိုးစားပါတယ်တ: တွက်ဆသုံးသပ်ပြီးနောက်, ငါမဟုတ်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာနှစ်ခုချဉ်းကပ်ဖော်ပြရန်လိမ့်မယ် စုဆောင်း (ပုဒ်မ 3.4.3) ။ အဓိကကစာသားအတွက်အငြင်းပွားမှုများစကားလုံးများနှင့်ရုပ်ပုံများနှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရှင်းပြခဲ့သည်လိမ့်မည်; တစ်ဦးထက်ပိုသင်္ချာကုသချင်ပါတယ်တဲ့သူစာဖတ်သူတွေလည်းနည်းပညာဆိုင်ရာနောက်ဆက်တွဲကြည့်ရှုသင့်ပါ။